Ndị nwụrụ anwụ nke ọgụ na Utrecht na-egosi n'ezie na ọ pụghị ịbụ Onye Okike? : Martin Vrijland
Ndị nwụrụ anwụ nke ọgụ na Utrecht na-egosi n'ezie na ọ pụghị ịbụ Onye Okike?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 19 March 2019	• 32 Comments
Ọ bụ ezie na ihe niile yiri ka ọ bụ ezi uche PsyOp (arụmụka uche) ebe a, ụbọchị tupu ntuli aka, e nwere akụkọ doro anya gbasara ọnwụ n'ezie. Ebee ka ị na-anụ ma hụ akụkọ ndị ahụ? Nri: na mgbasa ozi. Na n'ezie, ị na-ahụkwa na mgbasa ozi ọha na eze "ezigbo profaịlụ" na ezi ndị enyi na ezinụlọ ndị na-agbachitere na ha maara ndị ahụ metụtara na ndị ikwu ha. O doro anya na ị ga-ekpebiri onwe gị ma ị kwenyere na mwakpo dị otú ahụ ma ọ bụ na ọ bụghị, ma ana m anọgide na-akọwapụta ihe onwunwe na ohere ndị gọọmentị na ndị mgbasa ozi nwere n'aka ha iji soro ndị mmadụ rụọ ọrụ. Ha nwere ike ịmepụta profaịlụ mgbasa ozi na-acha anụnụ anụnụ (ma na netwọk na-egosi na ha nwere ike ịdabere). Ya mere i nweghi ike ikwu ma obu ndi nabatara ozi Facebook gi na okwu dika "Ọ bụ eziokwu n'ihi na ọ bụ ndị agbata obi m"Ma ọ bụ"Amaara m nwoke ahụ n'ihi na nwa m nọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ"(Na na) bụ n'ezie ndị mmadụ. Anyị nwekwara nnukwu netwọk nke Inoffizieller Mitarbeiter nke na-agba akaebe na-agba àmà mgbe ọ dị mkpa.
Ndị mgbasa ozi bụ ụzọ ọhụụ nke gọọmentị na-egosi gị ndị mmadụ na ihe oyiyi ha nwere ike (ma chọọ) igosi gị ịduzi echiche gị banyere ụwa. Site na mgbasa ozi mgbasa ozi, anyị nwere (site n'otu mgbasa ozi ahụ) echiche na e nwere ndị agha agha dum nke Russia nke na-emetụta mmetụta na Facebook na Twitter na profaịlụ adịgboroja, ma na nke a bụ n'ihi usoro a kwadoro emekwara nke ọma, n'ezie, gọrọ. N'ezie, ị nwere ike ịsị na ihe niile dị mkpa pụtara na ọ ga-eme ka ihe niile dị na ya doo anya ma chọpụta nchịkwa site na mgbasaozi na mgbasa ozi ọha na eze ruo nkọwa kacha mma. Ọ pụkwara ịbụ na onye ọrụ ebere na-arụ ọrụ na ndị nwere nsogbu. Nke a nwere ike itinye aka na ndị omempụ ma ndị akaebe. N'ebe ahụ, akpa ego ga-agbanye obere, n'ihi na ị ghaghị inye ndị mmadụ ụdị ọhụụ na ịdị adị na mba dị anya ebe ọ dị mkpa. Otú ọ dị, mkpa na mmetụta nke arụmọrụ ndị ahụ dị oke mma, ya mere i nwere ike ịtụ anya na ọ ga-eri ntakịrị. A sị ka e kwuwe, ọ bụ banyere mmeghe mmeghe nke ndị uweojii nwere ike iji achịkwa ọtụtụ nde mmadụ.
Otú ọ dị, mgbe anyị na-ahụ ihe oyiyi nke ndị ikwu na-eru újú ma ọ bụ ndị ikwu anyị, mmetụta ahụ na-ewe ngwa ngwa ma na-ahọrọ anyị ịtụle echiche na e nwere PsyOp na ahịhịa. Ị nwere ngọzi m, mana echere m na ọ dị mkpa ịghọta na n'ụzọ nkà na ụzụ, ọ dịghị ihe ọ bụla ga-eme ka ị nwee ike iji egwu na-egwu egwu site na ikuku egwu. E kwuwerị, ọ na-abịa site na ite ụtụ.
Ọ dị, n'ọnọdụ ọ bụla, dị ịrịba ama na e nwere ọhaneze a na-ebugharị n'ọdụ ụgbọelu na ọtụtụ ndị na-anọ n'ụlọ nanị n'ihi ya. Ọnọdụ nke agha ahụ bụkwa ihe dị ịrịba ama, n'ihi na ọ bụ n'ezie akụkụ nkuku (gịnị mere ị gaghị ahọrọ etiti?). Ọzọkwa, mmetụta nke ịwakpo ọgụ na ụbọchị ụbọchi bụ nke a na-atụghị anya na ọ ga-adị oke ka à ga-asị na ị họọrọ ụbọchị ọrụ ọrụ na ọnọdụ ọrụ. Akụkọ ndị akaebe dị oke nkenke, na-echepụta na ha anaghịzi adị ọkụ, mana gịnị mere? Ndi n̄wan emi ama ọwọn̄ọde ke n̄kan̄ emi onyụn̄ okụt n̄wan emi odude ke do? Gökmen Tanis na-agbapụ na windo site na tram? Onye na-anụ plop plop plop (n 'ogbi) na onye nke ozo nuru Ọ dị mma (enweghị damper). Ya mere ị na-agbapụ onye si tram; mgbe ahụ, a na-agbaji ihe mberede ahụ (ma ọ bụ na-agbagharị ụgbọ okporo ígwè), mana nwanyi ahụ nọ na-esote (ma ọ bụ n'azụ?) tram ahụ mgbe ahụ onye ọ bụla na-aga n'èzí Gökmen maliteghachikwa égbè ọzọ? Kedu ka nwanyị ahụ si si na tram ahụ pụọ? Ma gịnị mere ọ ga - eji jee ije n'èzí tram n'etiti 24 Oktoberplein? Ma ọ bụ ka ọ na-awụpụ mgbe a ka mechisịrị ọnụ ụzọ ahụ? Ka Tanis ọ na-agba ya n'èzí na tram ahụ wee banye (ebe a mechiri ụzọ ahụ ma tram na-agba ọsọ) wee pụta ọzọ? Iche (ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume) na akụkọ na-adịghị mma, ị naghị eche?
isi iyi: facebook.com
Onye amụma Daniel Molenaar na-arụ ọrụ dị mkpa na akụkọ a. Site n'ụzọ, gịnị kpatara naanị ndị na-ahụ maka 2 na mgbasa ozi? N'ezie, ụgbọ okporo ígwè ahụ (na-agagharị n'okporo ámá na-ada ụbọchị) nwere ọtụtụ ndị njem na-ahụ ihe? Daniel Molenaar bụ àmà na-adọrọ nnọọ mmasị. Ọ gbasoro usoro na Mahadum nke Utrecht ọ bụghị naanị otu ụzọ. Ọ mụtara New Media na Digital Culture. Ya mere, ọ ghaghị ịma ihe dị mkpa gbasara otu ị si nkwenye miri emi nwere ike ime, kama nke ahụ. Mahadum Utrecht bụ ebe siri ike nke Prof. dr. dr. Beatrice de Graaf (aha mara mma). Na 2004, o nwetara PhD na Mahadum Utrecht na nyocha banyere GDR, nke kachasị mmasị, n'ihi na nke a bụ oge nke Inoffizieller Mitarbeiter. Ndị mmadụ na-arụ ọrụ abụọ maka ọrụ nzuzo nzuzo nke East German. Echiche nke na nke a anaghị eme na Netherlands ma na ihe a na-apụ kpamkpam bụ ma eleghị anya nrọ kachasị njọ na anyị ga-agbaji.
Onye akaebe ọzọ bụ nwa nwoke aha ya bụ Nicky van Grinsven. Onye akaebe a nwere ike ịkọ akụkọ 'Allah Akbar'. Ọ nụla Gọkmen Tanis na-ekwu (dịka Daniel Molenaar). Tanis aghaghị ịbụwo onye omempụ ọjọọ iji nweta Nicky na 15 mita (na-agba akụkọ ya na Nieuwsurur). Ọ bụrụ na ị na-agbapụ, mee ya, ị ga-asị. Ma akụkọ akbar Allah Akbar bu nri di mma maka ọgba aghara "Ọ bụ ụjọ ugbu a ma ọ bụ na ọ bụ ma eleghị anya a crazy ex-jihadist?". Nke ahụ bụ nri dị mma nke na-eme ka ogwe aka ekpe na aka nri dị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị (na atụrụ) ha na-eme ntuli aka na olile anya ugha nke ndi ozo nke puru igosi ha oge a).
Anyị nwere ike ikwu hoo haa na ọgụ dị otú ahụ na-emesi ike maka mkpa ndị na-eyi ọha egwu. Emepụtawokwa ụfọdụ ngwá ọrụ ọhụrụ, dị ka ibudata foto ekwentị gaa na saịtị ndị uweojii (ma ọ bụghị maka ndị na-agụ akwụkwọ ọgụgụ, gụọ 'nyocha'), mmalite nke ikbenveilig.nl na Ntụle nchekwa nchekwa Facebook nke ị nwere ike ikwe ka ndị enyi gị mara na 1x na ị ka dị ndụ (gụọ 'nnukwu data'). Maka oge mbụ, ndị uweojii na-eji drones chọọ onye na-eme ihe ahụ, gọọmenti wee nwalee otú ụmụ amaala si nọgide na-abanye mgbe ha nwesịrị ịkpọ na mmejuputa usoro nwu egwu 5. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, koodu ndị egwu na-ama ndị mmadụ site na akụkọ ihu igwe (ụda koodu, acha ọbara ọbara, wdg) ma ugbu a na "ezigbo ụjọ".
Ka ọ dị ugbu a, arụmụka apụtawo na e nwere ihe mere a ga-eji chee banyere oké egwu, n'ihi na nwanne Gökmen nwere ike iso ndị isi ụka Caliphate si Turkey bịa (lee ebe a). Nke a bụ ịme ka ọgba aghara ahụ na imechi ọnụ ụzọ meghee egwu. Gökmen enweghị mmekọrịta na ndị ahụ metụtara, enwerekwa arụmụka ọzọ maka nhọrọ ụjọ (ma gịnị mere e ji zuo 1 ọgụ?). Na mgbakwunye, e nwere (oge a enweghị paspọtụ) ihe edeturu na Renault Clio nke Gökmen gaara eji pụọ. Na-ekwu RTL Nieuws: Na red Renault Clio na onye isi na-enyo enyo Gökmen T. eji mgbe agha ahụ, a chọpụtara otu ederede nke ga-egosi nke a, na-akọ Ọrụ Mgbasa Ọha. "Ụdị nke eziokwu" ga-egosikwa na. O doro anya na Gökmen jupụtara coke ma chefuo iji akwụkwọ ahụ dị mkpa na nchegbu ya. Anyị ga-ahụ ihe mere nke a ọzọ. N'ezie, anyị nwekwara akụkọ banyere enyi nwanyị ahụ maara Gökmen dị ka onye na-arụ ọrụ coke na mgbasa ozi nke Pauw & Jinek gosiri ụnyaahụ ihe osise nke nwoke na-atụghị anya ya nke na-eji ọtụtụ ọgwụ na mmanya eme ihe. Ya mere, mgbasa ozi mgbasa ozi niile na-agbarịta ụka site na nkwurịta okwu na-eme nke ọma ma ọ ga-atụ egwu ma ọ bụ ka ọ ghara ịtụ ụjọ, ebe a nwalere usoro a nke ọma maka otu ụbọchị na uru nke ala ndị uweojii abanyela n'ime ya.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: ad.nl, rtlnieuws.nl, ad.nl, uu.nl, npostart.nl, nos.nl, volkskrant.nl, enwu gbaa, geenstijl.nl, yahaling.nl
Ndị na-eyi ọha egwu wakporo 24 Oktoberplein na Utrecht, ụjọ na mba nile!
Gọkmen Tanis, onye a na-enyo enyo, jidere, ma eleghị anya ihe nkiri ezinụlọ
Mason Wells na-anwụ na mberede 3 na-eyi ọha egwu ma na-ekwu maka oge mbụ
Ntụle Brenton Harrison na-emegide ọgụ nke mgbochi na-emegide Turkey?
Tags: 24, agha, Daniel Molenaar, doden, ejije, echt, agba, merụrụ ahụ, Gökmen Tanis, Nicky van Grinsven, October square, mmekọrịta, ndị agha, egwu, iyi ọha egwu, Utrecht
19 March 2019 na 13: 44
Ọ dị mma na ị nọ n'elu ya. Chọta ndị ohu site na ha. Ọ ga-esi ike. Ndi ama ama ọfiọk owo emi prọfet emi odude ke idaha emi? Onye ọka iwu nwere ezigbo kọntaktị na Ọchịchị? Ònye na-etinyekwu aka na ya? Ọ na-akwụ ụgwọ ịbụ ndị enyi na steeti.
19 March 2019 na 13: 52
M ga-akpọ ya hypnosis mgbasa ozi. Ndị mmadụ bụ hypnosis nke hypnosis ngwaọrụ nke na-etinye ha n'ụzọ doro anya n'okpuru hypnosis na arụmụka na ihe oyiyi (nke azụ azụ na-eme njem bụ usoro dị mkpa). N'ihi ya, ịghagharị azụ na akụkọ akụkọ banyere egwu ma ọ bụ nsogbu mmekọrịta etcetera. N'ihi ya, okirikiri a na-agagharị na akụkọ NOS na azụ na nke onye na-ede akụkọ na onye na-agụ igwe / nwanyị.
Kedu ka ị si agwa ndị nọ n'okpuru hypnosis na ha na-eri ihe na-egbu egbu mgbe mmiri ọgwụ ahụ gwara ha na ọ bụ mango dị ụtọ? Mụ na Rasti Rostelli, nke ahụ bụ n'ezie ihe niile na-atọ ọchị, mana ole na ole na-aghọta na ndụ anyị dị adị na anyị na-abụ hypnosis ma mee ya n'eziokwu.
19 March 2019 na 14: 06
N'eziokwu, Milton Erickson, bụ onye ọsụ ụzọ na-agwọ ọrịa, na-arụsi ọrụ ike na nke ahụ. Izere onwe gi site n'ikwu okwu n'amaghi ama. Nke a mesịrị mee ka Tavistock nụchaa ya nakwa na ọ bụ ndị na-enyo enyo na-eme ka ndị mmadụ nwee ike ime ka ọha mmadụ, ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ na ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ, ndị na-eche echiche tankị na-arụ ọrụ dị iche iche, wdg.
19 March 2019 na 14: 18
Naanị tụlee nke a na kọfị kọfị, kama ịtụ ụjọ ma ọ bụ nsogbu ezinụlọ (ị maghị ya)
Naanị tụlee nke a:
Eziokwu ahụ bụ na Vimeo na-emechi emechi na saịtị kachasị onwe ya na Netherlands na-egosi na ike ọchịchị aka ike abụ abụ.
Vidio kachasị ọbara si na saịtị ndị ọzọ na ihe oyiyi jọgburu onwe ya dị na Vimeo na ka anyị ghara ọbụna ikwu banyere saịtị porn funzige, nke nwere ike ịnọgide na ọwa.
Ha niile na-abanye na ịntanetị ọ bụla na-ekiri fim ndị dị nro na-eme ka ụbụrụ gị na-arịa ọrịa. Mgbe ụfọdụ oke egwu nye ụmụaka ...
Ma BỤ BỤ
A kpochapuwo ọwa Vimeo nke Heer Vrijland site na intaneti n'izu a, na-enweghị ịdọ aka ná ntị dịka ya onwe ya gosipụtara n'isiokwu bu ụzọ.
Nke a karịrị ihe akaebe na anyị bi n'ọchịchị aka ike.
Ndi oru mgbasaozi ndi nwere ikike kwesiri ibughari ndi mmadu choro otu ugboro (karia ndi otu ulo oru ihe omimi a) choputara mkpuru osisi di iche iche noro na Medialand ma ka anyi nwee ntuli aka banyere nke a, n'ihi na anyi biara ugbu a na ndi ochichi (ndi ozo) ) na-agbakwunye Jinek Pauw na Nieuwkerkjes na-egosi, De Media na-ehichapụ uche anyị.
Ha nwere ike igosi ihe nkiri kachasị ọbara na TV na ịntanetị
Mana Onyenwe Vrijland Vimeo na-ekpochapu kpam kpam n'amaghị ama, ruru eru maka obodo onye kwuo uche ya, Ị GA-EKWU
Iberi dere, sị:
19 March 2019 na 15: 26
E jikọtara ọrụ a dị egwu na Utrecht na ọrụ na New Zealand. N'ihi ya, ana m atụ anya na arụmọrụ na nchekwa dị otú ahụ, karịsịa na West, na-agba ọsọ ruo 2023 n'afọ ndị na-abịanụ. Ndị mgbasa ozi ga-ahụ na mmetụta ndị na-emegide Turkey na-arịwanye elu n'etiti ndị mmadụ.
19 March 2019 na 15: 33
Na voila! Ebeekwa ka igwe ojii a si pụta? Ihe eleghara bụ .. https://nos.nl/artikel/2164422-erdogan-waarschuwt-europeanen-jullie-zullen-niet-veilig-zijn.html
19 March 2019 na 19: 31
@Iberi, idd Freemason Erdogan, ndị mmadụ na-egwu egwu ọzọ. Agha Pike ga - abịa ...
19 March 2019 na 19: 40
1-2s n'etiti Freemasons abụghị oge mbụ ... Mgbe Rutte na-enye aka mgbe a na-eme ntuli aka, Erdo na-elekọta nlekọta ahụ, ya mere, ụmụnne onwe ha
bụghị dere, sị:
19 March 2019 na 17: 47
M ka na-eche ma 18 March bụ ụbọchị pụrụ iche?
3 afọ gara aga na 22 March, e nwere mwakpo ahụ na Zaventem. Mgbe m chọrọ ileghachi anya azụ n'ụbọchị ahụ, achọtara m akụkọ na - agbagwoju anya banyere ọgụ ahụ:
19 March 2019 na 19: 37
Ọ dịghị RTL Bertelsmann AG, Tanis mere na nnọchite nke AIVD ndị na-aṅụ iyi na-akwado Willy 🙂
19 March 2019 na 20: 13
Otu ọkà mmụta Muslim dị mkpa bụ onye na-ekwu ihe na-eme gburugburu ụwa nwere njikọ na njedebe na 3 agha ụwa ma kwuo na Istanbul (Constantinople) ga-arụ ọrụ dị mkpa na nke a. Kewaa ma chịkwaa otú ahụ .. chere ihe ha na-abịa na Friday na 22e, Tower Bridge, West Coast USA? Ònye ga-asị ..
19 March 2019 na 20: 23
Ya mere, nke ahụ na-arụ ọrụ nke ọma, eh, Trollongren, ị hụghị na ndị ọrụ obodo a nwere ọdịmma kasịnụ maka ndị bastards?
"CTIVD zigara ụlọ ndị nnọchiteanya na November ka ha nwee ike ịlele ma kwurịta ozi nzuzo nzuzo nke obodo na-ekesa n'etiti mba. Site n'ibelata nzuzo, ndị nkịta nche ise na-achọ ime ka nlebara anya nke ọrụ nzuzo ha dịkwuo mma. "
20 March 2019 na 10: 30
M ga-achị ọchị dị ka a ga - asị na ọrụ nchekwa na-egosi azụ nke ire ha ka 'ndị nlekọta' NA ndị ozi. Tụkwasị na nke a, 'ndị nlekọta' anaghị achọ ịmata ihe niile n'ihi na ha nwere ihe ọmụma banyere mpụ, ha ga-aghọkwa ndị nwere mpụ, wdg. Ole ndị na-achịkwa 'ndị nlekọta'? Puppet gosi.
mb. dere, sị:
19 March 2019 na 21: 30
Ọzọkwa, mgbasa ozi ego:
Marjoram dere, sị:
21 March 2019 na 11: 27
Ị hụla na onye a bụ nwata site na mkpịsị aka ya? Ndị mmadụ na-aga agha n'ozuzu ya
19 March 2019 na 21: 31
Obere obere agba agba (foto parool)
Manuel Chaguaceda dere, sị:
20 March 2019 na 08: 23
Nnyocha na-adọrọ adọrọ kama ka anyị buru ụzọ chere ndidi 'mbipụta otu' ... 😉
20 March 2019 na 11: 51
"Ụzọ mgbapụ" si n'aka ndị njem nleta ọdachi! onye na-agba ọsọ gbaara akwụkwọ ozi na "ụmụnna" n'enweghị ihe ọ bụla? onye ahụ mejọrọ na-akwụ ụgwọ ya na ekwentị nke "enyi"?
21 March 2019 na 08: 46
Mgbe ụfọdụ, ị maghị ma ọ bụrụ na ihe bụ ihe mberede. Raid Trumanlaan. President America ma ọ bụ Trumanshow? Ụlọ alakụba ọgụ na Christchurch. Ụlọ Alakụba na Chọọchị Kraịst?
22 March 2019 na 17: 21
Na Manchester Arena:
22 March 2019 na 20: 38
Ana m ekele gị nke ukwuu, ọ bụ ezie na ndị ọzọ na-egosi ọtụtụ mmiri
nyocha na-eme ọtụtụ echiche na Media / Ike na-atụ egwu ya, nkeji 18, 35 enweghị ike ịmatakwuo ya
AnOpen dere, sị:
23 March 2019 na 13: 04
A na-akpọkarị ndị na-eyi ọha egwu bụ ndị na-achọ igbu ọtụtụ mmadụ dị ka o kwere mee. Onye a na-eyi ọha egwu gburu ebe dị jụụ, ebe ị na-atụghị anya ya. Ihe na-egbu egbu bụ na ha anaghị egbu ndị mpako nwoke, Ụbọchị Ncheta ma ọ bụ Ụbọchị Eze. Dị ka ezigbo onye na-eyi ọha egwu, ị ga-eme omume gị n'etiti ìgwè mmadụ ahụ. Dị ka Ọrụ Kpọtụrụ, ị na-abịaru ya nso dị ka New Zealand psyop. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-emegide ndị mmadụ dị ka IS, gịnị mere na ị na-eburu a nuklia osisi ike? Gaa na nche, nkwụsị onye ọrụ nke na-amalite mmeghachi omume olu ma ọ bụ nke ọzọ na-eme ka onye ahụ gụgharịrị. O doro anya na ha mere nke ahụ na mmanụ mmanụ, ma nke ahụ pụkwara ịdị na ụkwụ nke pylons na nnukwu ụlọ dị ka Nuon. Ma na mberede ọ dịghị eme. N'oge ezumike dị otú ahụ, ọ nwere ike ịgbanwe na ọgba aghara a na-achịkwaghị achịkwa, ha ga-anọgide na-achịkwa ma ọ gaghị aga dị ka atụmatụ.
24 March 2019 na 16: 01
N'ụzọ dị mwute, a na-echere ya nanị maka otu ezinụlọ ... ememe na obelisk
mma dere, sị:
24 March 2019 na 11: 31
Ihe na-emetụ m bụ na ọ dị ntakịrị ihe a maara banyere ndị ahụ metụtara. Ọbụna akwụkwọ akụkọ ahụ anaghị edepụta ya. Ebe otu ihe nlereanya a nwụrụ na nso nso a ma dee otu edemede banyere ụbọchị ọ bụla, ọ dịghị ihe ọ bụla edere banyere ndị a "metụtara". 1 ya bụ otu onye 19 dị afọ Roos Verschuur. Ma mgbe m Google aha a, enwere m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla gbasara ya. Ị nwere ike ịtụ anya na otu onye 19 dị afọ nke a mụrụ ma zụlite na oge nkà na ụzụ na-arụ ọrụ na Social Media. Enweghị akaụntụ Facebook, enweghị akaụntụ instagram, enweghị akaụntụ snapchat. Naanị foto ị hụrụ na Google bụ foto ndị akwụkwọ akụkọ ji.
Ọ dịghị enyi nwanyị na-eziga foto ya na ya na ederede dị ka m ga-atụgharị gị na wdg.
ma ọ bụ m chọọ kpam kpam na-ezighị ezi. Ma ikpe a na-esi ísì n'akụkụ niile.
24 March 2019 na 11: 42
Mba ị dị mma. Ma, ọ dịghị mkpa n'ihi na ndị mmadụ na-eji akụkọ na ihe osise dochie anya ndị mmadụ na-etinye okooko osisi na njem ịgbachi (ebe ọ bụla a na-emechi ụzọ niile.) Ihe oyiyi ndị a nwere ike ịme ka ndị mmadụ nwee ike ịkọwa ya ngwa ngwa.
Ekwesiri ighota na nke a bu software nke ulo-ubi-na-kichin onye obula nwere ike ibudata na nnaputa na awa ole na ole. John de Mol (ANP) nwere ihe kachasị mma na ya:
24 March 2019 na 15: 59
Otu ihe atụ bụ ihe a na-akpọ ọgụ na Amsterdam ..
24 March 2019 na 21: 46
Ihe i dere ede ziri ezi. Ọ na-ewute ya na onwe ya na-eche echiche na-eche echiche nke ndị nkịtị. Kedu mba. Kedu ihe ha na-eme.
Eke dere, sị:
27 March 2019 na 19: 06
Ọ dị ebe, n'echiche AD, na ọ bụ 'enweghị nkwanye ùgwù' maka ndị ahụ metụtara?
26 March 2019 na 11: 58
Oow ka anyị ghara ịma onye ọ bụ, ya mere anyị enweghị ike ịlele ma ọ dị adị?
gronz23 dere, sị:
27 March 2019 na 07: 58
Aha ya bụ Melanie (AD), ka ha na-ekwupụta? Ime ihe n'echeghị banyere onye ahụ, onye ahụ weere na ọ ga-adịrịrị adị adị mgbe obere ntakịrị fumbling. Ms Foundation Martje wepụrụ ụdị ozi ọ bụla (nke m zoro aka na onye nduzi ntọala ahụ, nna ya) ... nwanyị ọzọ na-ekwu banyere nwanna nwanyị na nne Roos bụ ndị ga-anọkwa ebe ahụ. O nwere ezi ulo, ya mere 'onye agbata obi na-ahazi ihe niile'. Dirk Kleppe (onye nduzi) na onye nduzi olili ozu René Werner nwere n'oge gara aga dị ka onye ndụmọdụ ego. Nna René Verschuur nwere FB mana naanị 1 ọzọ Verschuur, otu nwanne mama Lenie, onye na-enweghị ndị ọzọ Verschuurs. Foto ikpeazụ nna na nwa nwanyị si 2014 ....
27 March 2019 na 22: 51
26 March 2019 na 15: 08
Ọfọn, n'ihi gịnị ka iwu banyere 'nzuzo' ejidere? Ọ bụghị iji kpuchido nwa amaala, mana ka gọọmentị nwere ike ịnọgide na-eme ka ọ bụrụ ihe nzuzo site n'aka ndị nkịtị.
M na-ahụ na onye ahụ aja, yabụ m kpọrọ ya, akwụgoro ọkàiwu a na-enyo enyo. Kedu ihe ha maara ebe ha ga-ahụ ibe ha ka e wee nwee ike ịme edemede ahụ?
" Gọkmen Tanis, onye a na-enyo enyo, jidere, ma eleghị anya ihe nkiri ezinụlọ
Thierry Baudet Forum for Democracy (FvD) "Eziikwii nke Minerva gbasara nku ya" »
Nleta nile: 11.693.882
A ga - enwe ndị isi na - agagharị na ikpe Jeffrey Epstein?
Kedu ka 5G siri dị ize ndụ yana otu esi etinye ya na nzuzo
Egwurugwu na-anọchi anya okpukpe okpukpe na-anụ ọkụ n'obi ebe ndị na-akwado ya na-eche na ha na-alụ ọgụ maka 'iche iche na nsonye'
Onye isi ala Osama op Ndị Amazon na-ere ọkụ, ngụgụ nke ụwa na-ere ọkụ!
2 igwefoto op Ndị Amazon na-ere ọkụ, ngụgụ nke ụwa na-ere ọkụ!
Eke op Ihe kpatara transgender ji bụrụ iwu ọhụụ maka narị afọ 21 na heterosexual na-apụ n'anya
Martin Vrijland op Ndị Amazon na-ere ọkụ, ngụgụ nke ụwa na-ere ọkụ!
Jikọọ ndị 1.615 ndị ọzọ debanyere aha